Mpanamboatra / mpamatsy jiro LED hatramin'ny 2004 | LEDIA Lighting
LEDIA dia nanome vokatra tsara kalitao ho an'ireo mpiara-miombon'antoka hajaina manerana izao tontolo izao.
Hazavana henjana etona
Fanazavana tsy tapaka
Hotely & toeram-pivarotana
Gym & Fialam-boly
Tranomboky & Tranombakoka
Information momba ny indostria
Vokatra nasongadina na entana vaovao
LEDIA dia nanome vokatra tsara kalitao ho an'ireo mpiara-miombon'antoka hajaina manerana izao tontolo izao,
izy rehetra dia mahafeno fepetra DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC.
Fampiharana jiro ivelany
Ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpanjifa dia ahafahan'ny ekipanay manolotra tolotra manokana izay tsy misy na inona na inona.
Fampiharana jiro anatiny
Ny ekipan'ny famolavolana natokana ho an'ny famolavolana sy ny ekipa mpamokatra dia afaka manome vahaolana amin'ny fanamboarana mifanaraka amin'izany.
Fampiharana jiro fanorenana
Momba ny LEDIA
Niorina tamin'ny 2004, LEDIA dia orinasa teknolojia avo lenta. Ao amin'ny Distrikan'i Huadu (akaikin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Guangzhou Baiyun) no misy azy, ary sampan'ny vondrona Honglitronic. Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, LEDIA izay nametraka ny laza tsara ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina, dia lasa ny mpitarika orinasa amin'ny Linear jiro orinasa. Ho an'ny faharetan'ny orinasa, ny talenta sy ny fanavaozana no zava-dehibe raha ny kalitao no fiainana.
Ny LEDIA dia manana laboratoara fitiliana CNAS amin'ny ambaratongam-panjakana, manome antoka ny vokatra rehetra mandalo fitsapana mifandraika alohan'ny handehanana eny an-tsena. Ny vokatra vokarinay ao anatin'izany ny LED bare board light strip, PVC/silicone strip light, cabinet light ary ny jiro hafa dia samy nahazo ny taratasy fanamarinana China CCC, US UL/ETL certification, EU CE, ROHS, TUV ary Australia SAA, DLC, ENEC fanamarinana, mba hiantohana ny fahatokisan'ny mpanjifa ny vokatray. Hazavao izao tontolo izao amin'ny vokatra jiro tsipika no enjehin'ny LEDIA amin'ny fotoana rehetra.
Vina- Lasa orinasa miavaka eo amin'ny sehatry ny jiro LED any Sina.
asa fitoriana- Mamorona lanja jiro miaraka amin'ny siansa sy ny teknolojia, ary miezaha hanatanteraka ny nofinofin'ny ekipa.
Takelaka data R&D
LEDIA dia nanome vokatra sarobidy ho an'ireo mpiara-miombon'antoka hajaina manerana izao tontolo izao, ao anatin'izany ny jiro LED ivelany, jiro indostrialy LED, jiro ara-barotra LED ary jiro haingon-trano LED.
Olona mifandray: Sunny Sun
Adiresy: No.1 Xianke 1st Road, Huadong Town, Huadu Dist, Guangzhou, Sina